24 Jiona 2020 - FJKM Québec - Canada
24 Jiona 2020
24 juin 2020 by FJKM-QUEBEC
MATIO 5 : 25-26
5:25 Mihavana faingana amin’ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy ianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin’ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin’ny mpamatotra, ka hatao ao an-tranomaizina ianao.
5:26 Lazaiko aminao marina tokoa: Tsy ho afaka ao mihitsy ianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany indrindra.
1-Ataovy ny dingana
Mihavana faingana , hoy i Jesoa eto .Toa milaza zavatra hatao izany nefa toa milaza ihany koa fa tonga ny fotoana fanararaotra . Izay manana ady mihitsy eto no asain’ny Tompo mandeha manao ny dingana .Raha ny teny hoe: »mihavàna » dia tsy manatona ilay manana ady fotsiny fa miezaka mamitram-pihavanana mihitsy . Izany hoe : tsy vitan’ny fanatonana fotsiny fa arahina resaka fihavanana. Efa nataon’i Jesoa .Isika no diso dia Izy no nidina namonjy antsika . Nanao ny dingana voalohany Izy (vakio Rom 5.8).
Tsy ilay manana ady eto no fototry ny fahasarotana fa ilay miady .Fa sady tsy hivitrana ny fihavanana no tsy hahita rariny amin’n’y fitsarana izy . Zava-tsarotra amintsika olombelona izany raha amin’izao vanim-potoana iainantsika izao kanefa dia asain’i Jesoa tanterahana satria sady fanehoam-pitiavana no famitranam-pihavanana .Raha fehezina izany dia : nyfandeferana no làlana ivoahana amin’ny fandresena .
Oviana ianao no nihaona tamin’ilay olona manana ady aminao?